१९.६७ अङ्कले बढेको नेप्से १२२९.९१ विन्दुमा | गृहपृष्ठ
Home लगानी १९.६७ अङ्कले बढेको नेप्से १२२९.९१ विन्दुमा
on: २० भाद्र २०७५, बुधबार १४:१५ लगानी
१९.६७ अङ्कले बढेको नेप्से १२२९.९१ विन्दुमा
भदौ २०, काठमाडौं (अस) । बुधवार कारोबार भएको तेस्रो घण्टाको अवधिमा नेप्से १९ दशमलव ६७ अङ्कले बढेर १ हजार २ सय २९ दशमलव ९१ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि बढेको बजार यस अवधिसम्म १ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढेको छ ।
कारोबार भएका ११ समूहको परिसूचकमा व्यापार, उत्पादन तथा प्रशोधन र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से परिसूचक बढ्न पुगेको हो । नीर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत र बैङ्किङको १ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेपछि नेप्से बढ्न पुगेको हो ।
कारोबार भएका १ सय ५७ कम्पनीको १४ लाख ९ हजार २ सय २० कित्ता शेयरको रू. ४० करोड २८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएको कुमारी बैङ्कको प्रतिकित्ता रू. २ सय ३२ मा रू. ३ करोड ८८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
५ बैशाख २०७६, बिहीबार २२:११
५ बैशाख २०७६, बिहीबार २१:११
१२१६.४१ विन्दुमा नेप्से, ९ करोड बराबरको कारोबार (१२ बजेको अपडेट)
५ बैशाख २०७६, बिहीबार २०:११